Ungabaphinda njani kwakhona kwi-Instagram Stories Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
NgoJanuwari 14, 2019 0 IiCententarios 1071
Okwangoku, baninzi abasebenzisi iipolatifti zentlalo. Elinye lala maqonga aziwayo kwinqanaba lehlabathi yi-Instagram. Esinye sezixhobo ezisetyenziswa kakhulu ngamabali adumileyo e-Instagram. Nangona kunjalo, enye yezithintelo, kwimvelaphi yayo ibiyi ukungakwazi ukwenza i-oli umxholo womnye umsebenzisi. Iqonga lithathe inyathelo elikhulu kule ndawo, kuba kutshanje kunokwenzeka ukuba usebenzise isixhobo, njengokuphinda uthumele kwi-Instagram Stories.
Ekugqibeleni, ukwenza repost kuzalisekile ngokusebenzisa iqonga laseburhulumenteni elisemthethweni. Kwaye, yile nto ngoku isicelo sivumelekileyo ukwenza amabali okuphinda kuleyo sele ukhankanyiwe. Lo msebenzi uzuze impumelelo enkulu, ngaphandle kokulinganiselwa. Ngokuqinisekileyo, ukusikelwa umda khankanywa kwiBali. Kodwa ngenyaniso elula yokwazi ukuphinda ubuye kumabali e-Instagram, abasebenzisi bafikelele kwi-ecstasy.
Khankanywa kwiimbali ze-Instagram
Ukunikezelwa kwezinto ezintsha ze-Instagram kumabali abo, abasebenzisi banako ngoku khankanya abanye xa kulayishwa nayiphi na. Amanyathelo yile ilula kakhulu kwaye umntu okhankanyiweyo kufuneka afumane isaziso esimcebisayo Ngale ndlela, abalandeli baya kuba nakho ukubona okwenziwe ngumsebenzisi kunye nokuba ngubani umsebenzisi. Lo matshini okwangoku usemilebeni yomntu wonke, ngamanye amagama ukuthandwa.
Sele yaziwa kakuhle, ukuba iphindaphindiweyo okanye "iRegram" yinto yasekhaya xa usabelana nge-Facebook. Akukho nto ngaphandle kwendlela yokwabelana okanye phinda ulwazi Ithunyelwe ngumhlobo. Oku kwenziwe iminyaka ethile kusetyenziswa isicelo sangaphandle esibiziweyo Phindisela kwi-Instagram. Nangona kunjalo, kutshanje iqonga linayo iilayisensi ezivunyelweyo, indlela yokubuyela kwi-Instagram Amabali.
Imvelaphi yeli phepha-mvume lokusebenza, hayi ukumisela umda. Nangona kunjalo, oku akusiyo isizathu sokuba igama lakhe lehle okanye lisilele ukuthwala isiqhamo. Ngokuchasene noko, olu khetho lufumaneka kwi indlela yokuphumelela kwezentlalo. Ukukhumbula ukuba iapp ayyekisi kuhlaziya iqonga layo ukuze inikezele ngamava angcono kubo bonke abasebenzisi. Kule meko, indlela yakhe yayingu herramientas Indlela yokubuyela kwi-Instagram Amabali.
Isicelo esenziweyo sibhengezile a zincinci kodwa zinempikiswano Utshintsho kwisethingi lebali lakho. Ukususela kumzuzu othile okhankanywe ebalini, unako nikeza repost kuyo. Iqonga lagqiba ekubeni libize esi sixhobo njenge "Xela ukuBelana", igama elifanelekileyo kuba umsebenzisi uya kuyithumela kwakhona ilebheli yakhe ebalini.
Ixesha elincinci, abasebenzisi banokonwabela esi sixhobo. Nangona kunjalo, ukuze oku ube nayo uhlaziyo lwamva nje zesicelo, kuba ezangaphambili azifumaneki. Kukho ukulindelwa okuphezulu kophuhliso loKwabelana ngeSiseko, kuba kubasebenzisi into engaziwayo ibhengeziwe. Oku kunokuba, indlela yokuphinda ubuye kumanqaku e-Instagram. Ngethamsanqa iqonga lizamile ukusombulula nokugubungela Iindawo ezintsha
Al khankanywa Kwimbali ethile kuya kufuneka uqale ngokubakho kokuphinda ubhale kwakhona kwiimbali ze-Instagram. Ukwenza oku, kufuneka babe nee-akhawunti zikawonke-wonke ze-Instagram okanye babe Ukulandela ngomkhondo ukuze ngale ndlela umyalezo umyalezo ufikelele kubasebenzisi abahambelana.
Kanye umsebenzisi umaki kwelinye, elesibini elikhankanyiweyo liya kufumana a isaziso Esi saziso siya kubakho ngomyalezo othe ngqo osuka kwi-Instagram, apho ungabona khona umfanekiso okanye umxholo wemultimedia. Ukongeza kwileyibhile apho Isazisi sakho siya kuvela.
Yongeza kwibali lam
Ngezantsi nje kwesithuba apho umakeki khona umaki, ukhetho luya kuvela "Yongeza ebalini lam". Umntu kufuneka acofe umbhalo kunye ngokuzenzekelayo Isicelo siya kukuthumela kwinqanaba elilandelayo lokuphinda ubuye kumabali e-Instagram.
Umsebenzisi unako Ukuhlaziywa ushicilelo lwangaphambili. Nokuba ngokongeza izicatshulwa, emoji okanye izitikha, nantoni na oyithandayo. Nangona kunjalo, kubalulekile ukwazi ukuba igama le umdali Iposti yoqobo iya kuvela kumfanekiso. Ukongeza, ofuna ukuba nesabelo, angakwandisa okanye anciphise ukupapashwa, ukuthanda kwakho.
Emva kokwenza ubume bomsebenzisi ngokwezifiso, kuya kufuneka uqhubeke ne iposwe. Ukwenza oku, emva kokujonga zonke iinkcukacha, umsebenzisi kuya kufuneka acofe kwi-tab "Kwenziwe. " Kwaye ke imenyu yokhetho eyongezelelweyo iya kubonakala, apho kuya kufuneka ukhethe "ibali lam" kwaye emva koko ucofe Shicilela.
Kwaye, ngale ndlela, umsebenzisi ukwazile ukuphindaphinda kwiimbali ze-Instagram. Ngendlela ilula kwaye iyanyanzelwa Iinjongo ezinqwenelekayo zifezekisiwe. Elula kwaye isinxibelelanisi esisebenzayo I-Instagram yenza ukuba kunokwenzeka ukuphuculwa kwe-cyber kwezonxibelelwano zentlalo, ngokuya kukhula.
Unokuba nomdla indlela yokwenza imali kwi-Instagram yakho.
1 Khankanywa kwiimbali ze-Instagram
2 Phindaphinda kwi-Instagram
3 Xela uSabelo
4 Indlela yokubuyela kwi-Instagram Amabali
4.1 Umyalezo othe ngqo
4.2 Yongeza kwibali lam
4.3 Yenza ngokwezifiso
NgoJanuwari 13, 2019
Ungakhankanya njani kwi-Instagram Amabali, Super kulula!